Loharano malalaka open HTML20 maimaimpoana 5 sy modely CSS3 | Famoronana an-tserasera
Ity ambany ity dia afaka mahita 20 modely tranonkala HTML5 sy CSS3 maimaim-poana izay manome famolavolana sy fahalalahana lehibe amin'ny alàlan'ny fandraisana andraikitra. Ireo rehetra ireo Modely HTML5 Manana endrika tsara izy ireo ary misy fampiasa mandroso izay afaka manampy amin'ny asanao amin'ny Internet.
Iray amin'ireo toetra tsara ananan'ny sasany amin'ireo 20 modely HTML5 mamaly Izy no anao mifanentana amin'ny sehatra rehetra, ny mpizaha tranonkala rehetra ary mahazaka lesoka amin'ny fomba mora izy ireo. Raha mitady volavola ho an'ny tranonkalanao mitondra ny fironana famolavolana amin'ity taona vaovao ity ianao, tohizo ny fahazoana iray amin'ireo maodelin-tranonkala mamaly.
1 Tanana fanampiana
2 Skating snow
4 Tena ilaina
5 maintsy harahina
11 Sary lehibe
15 Toerana lavorary
18 alalan'ny milina azo baikoina
Modely matihanina, madio sy madio izay azo namboarina ho an'ny filan'ny mpampiasa.
Ao anaty ririnina isika ary inona no tsara kokoa noho ny modely amin'ity indray mitoraka ity ary ho an'ireo mpankafy fanatanjahan-tena toy ny ski. Toy ny teo aloha dia azo namboarina manokana izy io.
iray hafa modely HTML5 mamaly izay tsy azonao adino.
Miaraka amin'ny tsanganana 2 sy a layout «Widht fix» Tena ilaina dia mety ho ny maodely irina.
Modely maimaimpoana natao miaraka amin'ny HTML5 ary navoaka ambany Lisansa Creative Creative 3.0.
Modely tranonkala HTML5 sy CSS3 miaraka a fanamafisana ny loko manga sy fotsy ho an'ny karazana orinasa rehetra.
Natao ho an'ny tranonkalanao, fampiharana ho an'ny fitaovana finday, vokatra vaovao na tanjona hafa. Mamaly ary manana a toa tsara amin'ny karazana fitaovana rehetra.
Modely mamaly ho tranokala misy lohahevitra fanabeazana.
Ho an'ny karazana orinasa rehetra izay misy ifandraisany amin'ny fambolena ity no modely tonga lafatra.
Modely matihanina sy madio ho an'ny masoivohon'ny dia. Izy io dia azo atao manokana raha tianao.
Modely hafa kalitao avo.
Un modely maimaimpoana ho an'ny finday. Endri-javatra toy ny galerin'ny sary sy maro hafa.
Ho an'ireo mahalala manomboka amin'ny famolavolana tranonkala.
manokana modely ho an'ny mpaka sary, tranokala manokana sy orinasa.
Para masoivoho fizahan-tany na mpitari-dalana mpizahatany.
Izy io dia natao ho an'ny karazana fikasana rehetra na foto-kevitra.
Miankina amin'ny Twitter Bootstrap rafitra.
El lantom-peony amin'ny volondavenona sy fotsy mainty ary endrika polygonal hafa.
Con endrika manintona ary fisehoana pejy iray.
Miaraka amin'ny fizarana 6 Roller dia tsara modely ho an'ny mpaka sary.
Ny tombony azo amin'ireto Modely HTML5 dia ny ahafahanao manova azy ireo araka ny itiavanao azy ary tsy mila fikojakojana izy ireo toy ny mitranga amin'ireo mpitantana atiny sasany toa ny WordPress izay tokony hanavaozanao ny plugins sy ny fotony isaky ny kelikely.
Raha te-hametraka tetik'asa tranonkala mahaliana ianao miaraka amin'ny fipetrahana marobe, ireto modely tranonkala mamaly Izy ireo no safidy tsara indrindra satria ankoatry ny tsy mitaky fikojakojana, ny fotoana fampidinana azy ireo dia ho ambany noho ny an'ny CMS rehetra.
Fantatrao ve ny toerana maro ahafahanao mitazona azy modely HTML5 mamaly maimaimpoana? Avelao izahay haneho hevitra ary lazao aminay ny loharanom-pahalalana azonao mba ahazoana ireo karazana loharanom-pahalalana ilaina ho an'ny mpamorona tranonkala.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Templates » Modely HTML5 mamaly
Briizmarg dia hoy izy:
Misaotra an'ireo sosokevitra omenao amin'ny alàlan'ity lahatsoratra ity.
Tena hanampy be dia be ny maro izany.
Raha izaho dia nividy modely iray hampiasako amin'ny bilaogera, dia "html5 mamaly" ..
Ny zava-misy dia nieritreritra aho fa rehefa nividy azy aho dia ho avy miaraka amin'ny toro-lalana vitsivitsy, mba hanampiana ahy hametraka azy ho modely modely novidiko. Saingy tsia, tsy nitondra na inona na inona izany, ilay olona nivarotra izany tamiko dia tsy manana torolàlana ao amin'ny bilaoginy ary na eo aza ... mbola tsy afaka nampiasa azy io aho.
Mitady olona mahalala ny fomba fampiasana an'io karazana modely io aho mba hangataka ny tolotr'izy ireo ary hanampy ahy hametraka azy ao anaty bilaogy fitsapana, izay mila adika fotsiny ilay kaody ary apetaho ao amin'ny bilaogy izay tiako hampiasana azy.
Raha mahafantatra olona ianao, na ny tenanao, azonao atao ve ny mampahafantatra ahy amin'ny alàlan'ireo fanehoan-kevitra eto?
Mamaly an'i Briizmarg
super duper dia hoy izy:
epale tanana efa fantatrao ny fomba fametrahana ny modely amin'ny bilaogera dia mitovy amin'izany ihany aho
Valio i super duper
Misaotra an'ireo modely
misintona fandraisana anjara tena tsara ary andramako izy ireo…. Hiverina eo aho!!!!
Azonao atao ve ny milaza amiko ny fomba hanondroana maodely toy izao miaraka amin'ny fahazoan-dàlana Creative commons 3.0 ao amin'ny tranonkalako?
Misaotra anao !!
Manana zana-ketsa tena tsara izy, misaotra
Fampiharana an-tserasera 6 amin'ny fanovana sary Batch
Arch Anywhere dia mamela anao hametraka Arch Linux mafy sy haingana nefa tsy adala mandritra izany